Fiaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonina - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
Iraka sy fahitana
Loka sy fanatanterahana
Ny zavatra ataontsika
Iza no tompointsika
Ahoana no fomba hahazoana fanampiana
Vaovao sy hetsika
SERVICES LEGAL STATE PRAIRIE dia MAMPIASA NY VAROTRA-TANINDRAZANA MBA HAHAZO TSARA SY HAMONJY NY OLANA MAHATONGA NY VAHOAKA AVY AMIN'NY TONTOLON'NY ILLINOIS AZY
Ny mpiasa sy ny mpiasa an-tsitrapo dia mihaona amin'ny olona any an-tsekoly, hopitaly, fikambanana misahana ny asa sosialy ary ny manodidina azy ireo. Miasa amin'ny olana tsy manam-paharoa amin'ny mponina manokana izahay. Amin'ny alàlan'ny fisian'ny fandraisana anjara sy fandraisana anjara amina toerana maro samihafa eo amin'ny fiaraha-monina dia mahazo toky izahay, manorina fifandraisana ary miara-miasa amin'ny fanentanana hiatrehana ny olan'ny fahantrana sy ny fitoviana ara-poko.
FIVORIANA / FIANARANA
Prairie State Legal Services dia manome famelabelaran-kevitra ho an'ny fikambanana sy vondrona ao amin'ny faritany 36 izay tompoinay. Afaka mamaly ny fangatahana ataon'ny vondrona misy anao izahay hiresaka lohahevitra sy olana maro samihafa atrehan'ny fiaraha-monina, miankina amin'ny fisian'ny mpiasa mahay. Raha mila fanazavana fanampiny na hanontany momba ny fampisehoana, azafady Mifandraisa amin'ny biraonao eo an-toerana.
FAMPANORANA eken'ny MCLE
Prairie State dia manolotra fiofanana eken'ny MCLE ho an'ny mpisolovava any Illinois amin'ny lohahevitra isan-karazany, hahafahan'izy ireo manampy amin'ny filàna ara-dalàna an'ny vondron'olona ambany fidiram-bola. Raha mila fanazavana fanampiny, dia andefaso mailaka [email voaaro].
Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
6 ora lasa izay
Mirary soa ho an'ny rehetra ny 4 Jolay! Mikatona ny biraon'ny sampan-draharaham-panjakana Prairie ho fankalazana ny fety.	... See MoreJereo ny Less
Hijery ao amin'ny Facebook
TADIAVIANA NY BIRAO FITONDRANA
Prairie State Legal Services dia tsy manavakavaka amin'ny fanomezana serivisy miorina amin'ny firazanana, loko, fiaviana, fivavahana, firaisana ara-nofo, fahasembanana, taona, fironana ara-pananahana, mombamomba ny lahy na vavy ary ny toetra hafa arovan'ny lalàna.
Taratasy fitarainana fanavakavahana